भैंसीगोठमा मन्त्रीजी - परिहास - नेपाल
हाम्रा माननीय खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्माले भैंसीगोठ शुभारम्भ गरेछन् । त्यसबेला ट्याक्क खिचेको फोटो सामाजिक सन्जालमा झ्याप्प भाइरल भो । काम नपाएको मन्त्री भनेर सामाजिक सन्जालमा खेदो खन्ने बेकम्माहरुलाई त च्याप्प समातेर खोरमा जाक्नुपर्ने । काम भन्या पनि सानो–ठूलो हुन्छ र ? भट्टीपसल, ब्युटीपार्लरजस्ता झिलिमिली जिनिसको उद्घाटन गर्नुभन्दा त कृषि क्षेत्रमा टेवा पुर्‍याउने भैंसीगोठ, दैनिक जीवनमा अति उपयोगी शौचालय आदिको रिबन काट्नु पो महान् काम हो । फेसबुक चलाएर त्यसले के दिन्छ ? बरु भैंसीले दूध र गोबर दिन्छ ।
हैन त मन्त्रीज्यू ?